राजेन्द्र लिङ्देन जस्ले भ्रष्टाचार गरे आमाको रगत खानु बराबर भनेका छन्, उस्ले मात्र देश हाँक्न सक्नेमा म बिश्वस्त छु: डा. भोला रिजाल – Annapurna Post News
काठमाडौ। वरिष्ठ चिकित्सक डा. भोला रिजाल स्थानीय तह चुनावका मुखमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पक्षमा उभिएका छन्।
सार्वजनिक रुपमै आफू कुनै पार्टीमा नरहेको भएपनि लिङ्देनले गरेको सार्वजनिक प्रतिज्ञाबाट उनको पक्षमा रहेको डा. रिजालको भनाई। एउटा जनजातिको छोरा जसले भ्रष्टाचार गर्दा आमाको रगत खाएसरह हुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गरेकाले उसैले देश उकास्न सक्ने डा. रिजालको तर्क छ।
उनले लिङ्देनलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्ची खानेपानीमा गरेको प्रतिज्ञासँग समेत जोडेका छन्। म कुनै पार्टीमा छैन। मैले बोले भनेदेखिन यो पनि त्यता लागेछ भन्लान्। तर भनौं एकजना जनजातिको छोरोले आएर मैले भ्रष्टाचार गरे भने मेरो आमाको रगत खाए बराबार हो भनेर जसले यति ठूलो प्रतिज्ञा गरेर देश हाँक्छु भनेका छन्।
बा उहीँ हो कि मान्छे जसले यो देशलाई उकास्छ थाहा छैन मलाई तर त्यति अरुले आज सम्म किन बोल्न सकेनन्। मेरो भनाइ त्यति मात्र हो।’, डा. रिजालले लिङ्देनको उपक्षमा उभिनुको कारण यसरी खुलाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्‌घाटन समारोहमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै लिङ्देनले जनताले नेतालाई चोर भन्न थालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि लिङ्देन चर्चामा आउन थालेका हुन्। उनको अभिव्यक्तिको चर्को विरोध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए।
तर जनताले नेतालाई चोर भन्न थालेको लिङ्देनको अभिव्यक्तिको चर्को प्रतिरोध गर्ने ओलीले पोखरा महानगरपलिकाको मेयरमा सुन चोरलाई टिकट दिएर नेता ‘चोर’ हो भन्ने प्रमाणित गरेका छन्।
ओलीले पोखरा महानगरको मेयरमा दिपक पौडेललाई टिकट दिएपछि उनले सुन चोरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यता डा. रिजालले पनि लिङ्देनलाई समर्थन गर्नुको कारण उसको अभिव्यक्ति र कमिटमेन्टसँग जोडेका छन्। स्वास्थ्य लाइभबाट